Mpanamboatra sinoa tsara indrindra misy loko miloko CMYK fanontam-pirinty vita pirinty epoxy resin ho anao manokana mpamokatra sy orinasa | Hobrin
Mpanamboatra sinoa kalitao avo lenta namboarina fanontana CMYK fanontana fanontana manokana epoxy resin badge
● Fanodinana: fanontana sy fametahana loko 4
● Fitaovana: Copper / Stainless Steel / Aluminium
Ny marika fanontana vita pirinty dia afaka manome antsipirihany feno loko feno. Azonao atao ny mamolavola ny sary na sary miloko anao ary atolotrao aminay mba hanaovanay ireo mari-pamantarana mora mipetaka, ary ny ampahatelon'ny badge zinc alika maty dia lafo.
Ahoana ny famokarana azy ireo? Matetika, Manonta sy manaova akanjo fotsy madio aloha
Ny asanao dia ampiasaina hiteraka fisarahana loko (CMYK) isaky ny loko ary avy eo manaova takelaka fanontana ho an'ny loko tsirairay. Ny fonosana tsirairay avy dia vita pirinty amin'ny vy ary maina ao anaty lafaoro alohan'ny hanontana ny loko manaraka. Avy eo manapaka ny endrika vokatra avy amin'ny vy arakaraka ny volavolanao. Ampirisihina mafy ny hampiasa fonosana fiarovan-tena epoxy (dome) azo atao ho an'ny takelaka fanontana offset hiarovana ny enamel miloko tsy halazo na vaky rehefa mandeha ny fotoana.
Vidiny mirary: ny orinasan-tsoratry ny fanomezana marika Hobrin dia manome ny vidiny mirary indrindra amin'ny tsimatra manokana. Iray amin'ireo vidiny ambany indrindra amin'ny karazana badge rehetra ireo! Ny kalitao tena feno (CMYK) izay mahatoky amin'ny famolavolana voalohany.
Famolavolana tonga lafatra: Ny paosin-pirintinay vita pirinty dia manana famaranana vita pirinty, ary ny interface interface dia manana fivarotana sampana epoxy resin mangarahara. Amin'ny alàlan'ny fomba fijerin'ny reso epoxy, ny endritsika / ny fombanao, ny loko ary ny lahatsoratra vita pirinty dia azo taratra tanteraka, tanteraho tanteraka ny vokatry ny famolavolana.
Teo aloha: Mpanamboatra sinoa tsara tarehy epoxy overlay QR tag / ID pet pet / pet identité pet
Manaraka: Mpanamboatra sinoa faran'izay tsara fanao amin'ny enamel logo avo lenta vy fiarovana miaramila pin badge ny vidin'ny firaka zinc firaka embossed fanao pin sheriff vy badge